10 ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > အိုက်စလန်သို့သွားပါ > 10 ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောများ
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, Train Travel စကော့တလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား, အိုက်စလန်သို့သွားပါ
သမုဒ္ဒရာ၏အနက်၌, ကွာယဉ်ကျေးမှုကနေဝှက်ထား၏, နှင့်အချိန်အားဖြင့်နဂိုအတိုင်း, အဆိုပါများမှာ 10 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးရေငုပ်ခြင်းနေရာများ. ရောင်စုံတောက်ပသောသန္တာကျောက်တန်းများမှဒုတိယကမ္ဘာစစ်သင်္ဘောများပျက်စီးခဲ့သည်, တောရိုင်းပင်လယ်ဘဝ, နှင့်အပြာတွင်း, ဒီရေငုပ်ချိန်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့ပဲ.
1. တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောဆိုက်: မဟာတံတိုင်းကြီး
10 နှစ်စဉ်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်သန်းတစ်ရာသည်တရုတ်ပြည် Great Wall သို့သွားသည်, ကမ္ဘာပေါ်ရှိအထင်ကရဆုံးသောနေရာတစ်ခုတွင်ရေငုပ်။ ရေငုပ်နိုင်သည်ကိုလူအနည်းငယ်သာသိကြသည်. လူအများစုက ၂၁၀၀၀၀ ကီလိုမီတာနံရံတစ်လျှောက်လျှောက်လှမ်းနေစဉ်, ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက် pics ကိုရယူရန်, Panjiakou ရေလှောင်ကန်သည်ရေအောက်ရေငုပ်သည့်နေရာဖြစ်သည်. တရုတ်ပြည်၏မဟာတံတိုင်းကြီးသည်တစ်ခုတည်းသောကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်, သင်အမှန်တကယ်အတွက်ငုပ်နိုင်ပါတယ်.
အင်ဒိုနီးရှားသို့မဟုတ်ဖီဂျီများတွင်ရေငုပ်ခြင်းကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးလှပမှုမရှိပေ, ဒါပေမယ့်တရုတ်ပြည်ကမဟာတံတိုင်းရဲ့မြင်ကွင်းကနေမင်းကိုလုံးဝသိမ်းသွားမှာပါ. ထိပ်ကနေပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားရုံတင်မကဘဲ, ဒါပေမယ့်အစကတည်းကကရှာဖွေတွေ့ရှိ, အုတ်ကနေတက်, နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာရပ်တန့်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှရှင်သန်, မင်းဆက်များ, နှင့်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများ.
တရုတ်ပြည်ရှိမဟာတံတိုင်းကြီးတွင်ရေငုပ်ခြင်းသည်အဆင့်မြင့်ရေငုပ်သမားများအတွက်ပင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. အကြောင်းပြချက်အပူချိန်နိမ့်သည်, အများဆုံးရောက်ရှိ 10 11 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ, တွင်7နွေရာသီအတွက်နက်ရှိုင်းသောမီတာ. ထိုကွောငျ့, Great Wall တွင်ရေငုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်သင်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားမှသာဖြစ်သည်. နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် တစ် ဦး ပြီးစီးခဲ့နိမ့်ဆုံး 100 သို့ 200 အပန်းဖြေရေငုပ်သမားများအတွက်ငုပ်.
2. ယူကေတွင်အကောင်းဆုံးရေငုပ်သည့်နေရာ: ဝေလနယ်
ဂူနှင့်အတူ, 500 ချုံး, နှင့်ခမ်းနားပင်လယ်ဘဝ, ဝေလနယ်ကမ်းရိုးတန်းသည်ရေငုပ်ခြင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်. ဤတွင်သင် Skomer ၏ရေ၌ 50 ကျော်မီနုပ်နိုင်ပါတယ်, နှင့် Skokholm, နှင့် Middleholm ကျွန်းများ. အဆိုပါမြင်ကွင်းareaရိယာထဲမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်, လှပသောပင်လယ်ဘဝကိုမင်းကိုကြည်နူးလေးစားမိစေပြီးသမိုင်းကိုရောက်ခဲ့လျှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပျက်အစီးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်.
ကအိပ်ချင်အမြင်ရှိနေသော်လည်း, Wales ဟာဥရောပမှာတကယ်ရေငုပ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ. ဥပမာ, Pembrokeshire ရှိ Skomer Marine Reserve သည် Wales ရှိအကောင်းဆုံးရေငုပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်: ငါးခူ, လင်းပိုင်, ပင်လယ်ပတ်ကျိနှင့် seahorses, သင်တွေ့ရမည့်ပင်လယ်သတ္တဝါအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်.
3. Best Diving Site In Italy: မင်္ဂလာပါ
နှင့် 20 ကွဲပြားခြားနားသောရေငုပ်အစက်အပြောက်, Portofino တစ် ဦး ထက်ပိုပါတယ် ဥရောပအတွက်ချစ်စရာကောင်းကမ်းရိုးတန်းမြို့. ချစ်စရာကောင်းမြို့တွင်းအပြင်, စားသောက်ဆိုင်, နှင့်ကမ်းခြေ, Ligurian ကမ်းခြေသည်ဥရောပ၌ရေငုပ်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ပထမဦးစွာ, Portofino Marine Reserve သည်အစိမ်းရောင်ရေငုပ်သမားများအတွက်အံ့ဖွယ်သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်ပျက်စီးခြင်းများကိုပေးသည်. ဒုတိယအ, ခရစ်တော်၏ရုပ်ထုတော်, အနက်ဆုံးသောခရစ်တော်သည်ထိပ်ဆုံးမှတစ်ခုဖြစ်သည်5Portofino အတွက်ရေငုပ်က်ဘ်ဆိုက်များ. နောက်ဆုံး, ဒါပေမယ့်မရအနည်းဆုံး, ကနေဒါ MOHAWK သမင်ချုံးချုံးကျမှုကြောင့်နောက်ထပ်ရေငုပ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည် 20-40 မီတာ.
ကောက်ချက်ချရန်, Portofino ၏ရေငုပ်နေရာများသည်သင်၏ပထမဆုံးရေငုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, နှင့်အခြားရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် သဘာဝအံ့သြစရာ သင်တစ် ဦး အတွေ့အကြုံရှိရေငုပ်သူဆိုရင်.
မီလန်တစ်ရထားနှင့်အတူ Portofino ရန်
တစ်ရထားနှင့်အတူ Portofino ရန်ဗင်းနစ်
မီးရထားနှင့်အတူ Portofino ရန် Florence
တစ်ရထားနှင့်အတူ Portofino ရန်တူရင်
4. ပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောဆိုက်: French Guadeloupe ကျွန်းများ
ကာရစ်ဘီယံပရဒိသု၌တည်၏, la Guadaloupe ကျွန်းများသည်ပြင်သစ်ရေငုပ်သင်္ဘောအနည်းငယ်ဖြစ်သည်. ဤကျွန်းငယ်လေးတွင် La Grande Terre ပါဝင်သည်, နှင့် Petite Terre, မီးတောင်တစ်ခုဖြစ်သည်, မိုးသစ်တော, လှပသောရှုခင်းနှင့်ကမ်းခြေများ, နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးရေငုပ်က်ဘ်ဆိုက်များထဲကတစ်ခု.
ဂူဒယ်လူးကျွန်းများသည်ဘာလီနှင့်ဘီလီဇ်ကဲ့သို့ရေပန်းစားသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ဒီမှာရေကြောင်းကမင်းရဲ့အားလပ်ရက်တစ်ခုလုံးအတွက်ရေအောက်မှာကျိန်းသေနေလိမ့်မယ်. Cousteau Marine Reserve သည် Guadeloupe တွင်ရေငုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်, သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, လိပ်ဂူ, နှင့်စွန့်စားမှုရေငုပ်သမားအဘို့များစွာသောပိုပြီးဝှက်ထားသောအစက်အပြောက်, နှင့်ကာရေဘီယံပင်လယ်၌ပင်လယ်ဘဝကိုခံစားချင်သောပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်.
Guadeloupe တွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးရေ၏အပူချိန်မှာ ၂၃ မှ ၂၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်ချင်တိုင်းရေငုပ်နိုင်သည်.
5. Orkney ကျွန်းများ, စကော့တလန်
အစိမ်းရောင်မြက်ခင်းပြင်ကျော်, တောင်ကုန်းများ, နှင့်တောင်များ, Orkney ကျွန်းများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးရေကြောင်းသမိုင်းကြောင်းရှိသည်. တိုက်ရိုက်, ရှိပါတယ်7စကော့တလန်ရှိ Orkney ရေအောက်ခြေရှိရေယာဉ်များ. Scapa Flow ရှိဂျာမန်ပင်လယ်ရေယာဉ်စုမှဤအပျက်အစီးများ, တွင် 1919.
အဆိုပါချုံးချုံးကျသွားတယ်အပြင်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေထဲမှာစူးစမ်းဖို့အံ့သြဖွယ်အဏ္ဏဝါတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရှိပါတယ်. ဥပမာအားဖြင့်, Churchill Barrier နှင့် Yesnaby (သို့) Inganess တို့၏ရေများသည်ရိုင်းစိုင်းသောဘဝကိုရှာဖွေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
နိုဝင်ဘာလမှအီစတာ, အပူချိန် 13 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်တဲ့အခါ.
6. ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောများ: Silfra, အိုက်စလန်
နှစ်ခုတိုက်ကြီးအကြား, ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ သင်္velန်းကျွန်းအမျိုးသားဥယျာဉ်, အိုက်စလန်တွင်အရှင်းလင်းဆုံးရေသည်သင့်အားအံ့သြဖွယ်ရေငုပ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုစောင့်ဆိုင်းစေသည်. Silfra ရှိထူးခြားသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာထူးခြားချက်များသည်အတွေ့အကြုံရှိရေငုပ်သမားများအတွက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဥမင်များနှင့်ဥမင်များကိုပေးသည်.
Silfra တွင်ရေငုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးမှာအက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်. ဒီရေငုပ်လမ်းကြောင်းကိုနှစ်စဉ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ2မြောက်အမေရိကနှင့် Eurasian ချက်မှာမဟာပြား၏စင်တီမီတာလှုပ်ရှားမှု. ၎င်းကိုငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးတီထွင်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ရေငုပ်ဘို့လုံးဝလုံခြုံသည်, ဒါကြောင့်မေ့မရနိုင်တဲ့ရေငုပ်အတွေ့အကြုံအတွက်အိုက်စလန်ရေပြင်မှာစတင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်.
Silfra တွင်အများဆုံးရေငုပ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည် 18 မီတာ.
7. ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောများ: ဘာလီ
သဲကမ်းခြေပတ်လည်, ဘုရားကျောင်း, မီးတောင်တောင်များ, မှော်ဘာလီ၏ရေသည်သူတို့ဘာသာတွေးတောနေသည့်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်. သေချာပါတယ်, ဘာလီသည်အားလပ်ရက်ခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးရေငုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ဘာလီတွင်, သူတို့ကနေရာတိုင်းဖြစ်သောကြောင့်သင်သည်များစွာသောရေငုပ်နေရာများအကြားသင်၏အချိန်ခွဲနိုင်ပါတယ်. ရောင်စုံသန္တာကျောက်တန်းများမှfishရာမငါးများအထိ, နှင့်စိတ်ကိုမှုတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မှဂူ, ဘာလီရေအောက်သည်ရေငုပ်ရန်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောကမ္ဘာဖြစ်သည် ရေနံချောင်း.
မေလမှနိုဝင်ဘာလသည်ဘာလီကျွန်း၌ရေငုပ်နေသောရာသီဖြစ်သည်, Manta Rays ကိုကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့toပြီမှမေလ.
8. ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောများ: ဘေလီဇ်ခုနှစ်တွင်အပြာရောင်တွင်း
125 နက်ရှိုင်းသောမီတာ, ပုံသဏ္inာန်အတွက်မြို့ပတ်ရထား, နှင့်ခမ်းနားဝေဟင်အမြင်နှင့်အတူ, ဘေလီဇ်အတွက်အပြာရောင် Hole ရေငုပ် site ကို, ထိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ် 10 ကမ္ဘာပေါ်မှာရေငုပ်ရန်လိုအပ်သည်. ဒီgရာမတွင်းကြီးက Belize ရှိ Lighthouse Reef ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ကောင်းသောမြင်နိုင်၌တည်၏, သင်မမေ့နိုင်သောရေငုပ်စွန့်စားမှုတစ်ခုတွင်သင်ရောက်ရှိပေမည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းရှိအခြားအကောင်းဆုံးရေငုပ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မတူဘဲ, Blue Hole သည်ဘာလီပန်းပုလက်ရာများမဟုတ်ပါ, ရှားပါးပင်လယ်ဘဝ, သို့မဟုတ်ရောင်စုံကျောက်တန်း. အဘယ်အရာကိုသင်ရှာတွေ့သည်, ဒါကနောက် divemaster အဆင့်အထိရောက်လိမ့်မယ်.
The Blue Hole တွင်ရေငုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်:
9. Raja Ampat |: ကမ္ဘာ၏အဆုံးမှာရေငုပ်
အထိယဉ်ကျေးမှုကနေစောင့်ရှောက် 2004, Raja Ampat သည်ပုန်းကွယ်နေသောပရဒိသုဖြစ်သည်, အင်ဒိုနီးရှားနှင့်သြစတြေးလျအကြားတည်ရှိသည်. ဒီနှောင်းပိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Raja Ampat ရှိအဏ္ဏဝါတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရိုင်းရိုင်းဆုံးသတ္တဝါများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်.
သငျသညျ Raja Ampat အတွက်ငုပ်သည့်အခါ, သင်ကျော်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ် 600 တစ် ဦး တည်းခဲသန္တာမျိုးစိတ်, ရောင်စုံနှင့် Out-of-ဒီ - ကမ္ဘာကြီးကိုအဏ္ဏဝါဘဝအပြင်. ဤထူးခြားသောကမ္ဘာသည်အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်4အဓိကကျွန်းများ: တောင်ကြီးမြို့, Batanta, စလာဝတီ, ဝေးလံခေါင်သီသောအနောက်ပါပူဝါရှိ Misool.
သင်အဆင့်မြင့်ရေငုပ်သင်္ဘောမှအလယ်အလတ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်၏နောက်ရေငုပ်အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အား Raja Ampat တွင်ဘွတ်ကင်လုပ်သင့်သည်.
Raje Ampat တွင်ရေငုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်:
နိုဝင်ဘာလမှAprilပြီလအထိအပူချိန်မှသည် 27 သို့ 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်.
10. တရုတ်ပြည်၏အကောင်းဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောများ: Qiandao ရေကန်ရှိ Shi Cheng ရှေးဟောင်းမြို့တော်
တထောင်ကျွန်းများရေကန်၌နက်ရှိုင်း, Zhejiang ပြည်နယ်၌တည်၏, အဆိုပါ ရှေးဟောင်းမြို့ Shi Cheng ၏တည်ရှိသည်. ၏အတိမ်အနက်ကိုမှာ 40 မီတာ, ပျောက်သောတရုတ်မြို့၏အံ့ဖွယ်ရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. ပြင်းထန်သောရေနှင့်အချိန်များရှိနေသော်လည်း, မြို့တော်ရဲ့ဗိသုကာအင်္ဂါရပ်များ, ပင်သစ်သားအသေးစိတ်ကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားကြသည်.
ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, Shi Cheng မြို့သည်ရေငုပ်သမားများအတွက်ပုန်းကွယ်နေသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. များစွာသောသူတို့သည် Qiandao ရေကန်၏လှပမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မြို့ဟာခရီးသွားရတာပိုပြီးအံ့ reason စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. မြို့နှင့်ချိုင့်ဝှမ်း၌ရေလွှမ်းမိုးခဲ့သည် 1959, ဒါပေမယ့်ရေငုပ်ဖို့လုံးဝလုံခြုံသည်.
Shi Cheng တွင်ရေငုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်:
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, မမေ့နိုင်သောခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် 10 ရထားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးရေငုပ်ခြင်းနေရာများ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးရေငုပ် 1o ဆိုဒ်များ 1” ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုသင့်ဆိုဒ်သို့ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fbest-diving-sites-world%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)